Pane Chinhu Chakanaka Pamusoro peSeO yeZvibatsiro? Iwe Une Inotsvaga Engine Engine Optimization Starter Guide?
Search injini optimization (kana SEO) inowanzopararira chiito chekuwedzera zvose: hutano uye huwandu hwemigwagwa kuenda kune webhusaiti kuburikidza nehupenyu hwekutsvaga injini dzemigumisiro. Zvichinyorwa, SEO inongoita kuti ruzivo ruonekwe kune vavanoteerera.
SEO inogona kusunganidzwa nekambani chero kambani ine chigadzirwa kana basa rinofanira kupa - zvichida, pane mumwe kunze uko arikutsvaka. Nekubudirira kweSEO hurongwa munzvimbo, tarisiro inogona kutsvaga mazwi akakodzera muGoogle inovaendesa kune bhizinesi rako. Kunyange zvazvo chiri chokwadi kuti anenge mabhizinesi ose anogona kuwana mukana kubva ku SEO, Semalt nyanzvi akawana kuti mamwe mashizha, kusanganisira zvipo, anogona kubatsirwa nekutsvaga injini kugadzirisa kupfuura vamwe.
Sezvakataurwa pamusoro apa, chinangwa chikuru cheSeo ndechokuti ruzivo ruonekwe kune vanhu vaunoda kukuwana. Kune avo vanoita rudo, izvo zvinoreva kusvika kune vanhu vanofarira kutsigira chikonzero chimwe chete iwe, uye uchida kupa zvipo kutsigira basa rako.
Kunyange zvazvo pasina chinhu chakakosha pamusoro peSEO yezvipo, iwe unofanirwa kubatisisa mazano eSeO akanyorwa pasi apa. Vachakubatsira zviri nani kunzwisisa kuti nei SEO inonyanya kukoshesa zvakadai semabhizimisi uyewo kutsanangura kuti unotangira kupi apo iwe wakasika SEO campaign ye rudo rwako.
Tsvaga Engine Optimization Starter Guide yeHurumende Zvibvumirano
Zvikonzero Zvinoita Kuti Rudo Rwako Rubatanidzwe mune SEO:
Simudza mari: nzira inokurumidza uye iri nyore yekupa. SEO ndiyo nzira yakanakisisa iyo munhu anogona kutyaira vashanyi zvakananga kana kuti zvisina kukodzera pepa rake rekupa paIndaneti peji.
Kuwedzera ruzivo: Webhupu yekubatsira ndiyo mukana wakakwana unogona kuparadzira shoko pamusoro pesangano rake, kupa vanhu mukana wekuzvionera ivo pachavo.
Ita kuvimba nekuvimbika: Nzira yakarongeka yeSET inobatsira kusimbisa mukurumbira wakasimba. Inoshanda sezvinotevera: kana rudo rwako ruine nyore kuwana paIndaneti, vanhu vane chivimbo chikuru pane zvauri kuita.
Zvinhu Zvaunofunga Kufunga Usati Watanga Chirongwa SEO Campaign
Cherechedza Zvinyorwa Zvitsva
Unofanira kunyatsosarudza yako chinyorwa mazwi. Sarudza avo vanonyatsotsanangura zviri mukati. Funga pamusoro pezvaunotarisira, chii chavangatsvaga kuti uwane rudo rwako. Edza kusarudza zvisingakanganwiki, kuitira kuti pane mikana yakawanda vanhu vachaita sangano renyu zvakare uye vaudza vamwe nezvazvo.
Tsanangura nzvimbo yako yerudo. Rega vanhu vazive kuti sangano rako rinoshanda kupi. Yeuka, nzvimbo inokosha zvikuru. Pakutanga, usapedza nguva uchiedza kunyoresa zvikuru kunze kwenharaunda yako. Kuisa pfungwa dzako pamabasa eSOO kunogona kubatsira.
Chengetedza Zvaunofunga Zvitsva uye zvinobatsira
Zvinyorwa zvinotarisirwa zvinofanira kunge zviri mberi kwako. Zvinokurudzirwa zvikuru kuti iwe uzadze nzvimbo yako nehupenyu hutsva, hunobatsira uye hunonakidza nguva dzose. Gara uchiyeuka, Google uye mamwe injini dzinotsvaga zvikomboti nezvakakosha kuburikidza nekuwedzera maitiro avo zvichienderana nezvinhu zvakadai se:
Nguva yakashandiswa panzvimbo yepaiti;
kunze kwemashoko kunzvimbo.
Uyewo, iva nechokwadi chokuti webusaiti yako yekubatsira inofambisa-yakagadziriswa uye isina kukanganisa kwehutano huri nani hwemushandisi.
Endai Nokuda Kwamunofarira SEO
Tariro yawakanakidzwa nayo iyi yekutsvaga injini yekugadzira starter guide. Cherechedza kuti idzi idzi dzinongova mazano mashomanana ekutora SEO yako kusimba pasina kushandisa nguva yakawandisa uye mari Source . Tanga kusika rudo rwako SEO mushandirapano iye zvino uye ona chii chinoitika kune yako rankings mumwedzi!